# ENDSARS: Ikpe Ikpe Drama dị ka onye ọka iwu na-akwado Nkwupụta Ọkà Mmụta Ọmụma Na Ọ Bụ Naanị Mmadụ Atọ nke Ahụhụ 99 Na-enwetara Bụ Ndị Egburu
Prọfesọ John Obafunwa, onye ọkachamara n'ọrịa na nyocha gbasara ahụike, gwara ndị ọka ikpe nke steeti Lagos na nkwụghachi ụgwọ maka mmejọ metụtara SARS na ihe ndị ọzọ na Satọdee na ndị na-ahụ maka ndị nwụrụ anwụ mere ozu ozu ozu 99 n'agbata Ọktoba 20 na 27.
Obafunwa mere nkwupụta a n'oge akaebe iji nyere ndị otu aka nyocha na agbapụ agbapụ October 20 n'ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ Lekki.
Ọkammụta ahụ, bụ onye tinyere aka na ọrụ nyocha ọfịs site na ụlọ ọrụ Chief Medical Examiner nke Lagos Steeti, kwuru na ndị ọrụ nke Lagos State Environmental Health Monitoring Unit LASEHMU chịkọtara ozu 99 ahụ site n'ọtụtụ ebe.
Dabere na ChannelsTV, onye ọkammụta ahụ kọwara naanị atọ n'ime ozu 99 dị ka ndị metụtara Lekki.
O kwurịtara banyere mkpesa ọnwụ na ihe kpatara ọnwụ maka nwoke ọ bụla nwoke atọ ahụ metụtara.
Ọzọkwa, onye akaebe ahụ gosipụtara ihe ngosi vidiyo na-akọwa oke mmerụ ahụ onye ahụ nwụrụ anwụ na ihe kpatara ọnwụ.
Dị ka onye akaebe ahụ siri kwuo, ebubatara ozu mbụ nke onye amaghị ama aha ya bụ 005, EndSARS/Yaba/2020 Akwa Lekki na Ọktọba 24 site na ụlọ ọrụ gọọmentị steeti Lagos wee kpughee mgbaji ọkpụkpụ, ọnya n'akụkụ aka ekpe nke okpokoro isi, yana ahụ na -erekasị.
Dị ka ọkà n'ihe banyere ọrịa ahụ si kwuo, ihe kpatara ọnwụ bụ “ọbara ọgbụgba n'ime oghere obi dị ka ihe ike na-akụda obi.”
Dị ka onye akaebe ahụ si kwuo, ahụ nke abụọ, “041 amabeghị onye ọ bụ,” nwụrụ n'ihe dị ka elekere 1.45 nke ụtụtụ na Ọktoba 21 wee gbaga na ya. Ụlọ ọgwụ Reddington Lekki amaghị ama n'ihi mgbaji ọkpụkpụ okpokoro isi. Ekwuputara na ọ nwụọla mgbe mbọ a na -agba ịtụte ya kụrụ afọ n'ala, ebuga ya na LASUTH na Nọvemba 1 maka ịnwụ.
Onye akaebe ahụ kwuru, sị: “X-ray e gosiri tupu ya emetụ ahụ ya aka ekpughị bọl ma ọ bụ pellel. “The x-ray kpughere ọtụtụ mgbaji ọkpụkpụ na okpokoro isi.”
Achọpụtara akwa laged nke na-esite n'aka ekpe gaa n'akụkụ aka nri nke okpokoro isi n'oge nyocha. Nnyocha ọzọ nke ọnya ahụ gosipụtara ọbara ọgbụgba n'ime isi, otutu okpukpu isi, na ọbara ọgbụgba n'ime ụbụrụ. E nwere ọnya na mgbaji dị n'ihu nke ọgịrịga ekpe n'ime igbe ahụ.
Akụkụ ahụ́ dị n'ime dịkarịsịrị ọcha, na-egosi oké mfu ọbara. Site na microscope na n'omume DNA, a chọpụtara na onye ọrịa nwere ọbara mgbali elu nwụrụ n'ihi okpokoro isi na ụbụrụ o merụrụ emerụ ahụ ike na-adịghị mma. ”
Thezọ nke atọ, akpọrọ “062 amataghị onye amata,” kọkwara na ọ nwụrụ na Lekki tollgate. Akụkọ kwuru na e bugara ozu ya n'ụlọ ọgwụ dị na Yaba, ebe e mere nyocha ozu na Nọvemba 2. Ihe butere ọnwụ bụ oke mbibi ọbara n'ihi mmerụ egbe ahụ nke mebiri nnukwu arịa ọbara.
Olumide Fusika, onye ndụmọdụ maka ọtụtụ ndị ngagharị iwe # EndSars, katọrọ akaebe na ọ bụ sọọsọ atọ n'ime ozu 99 metụtara ọgbaghara ndị Lekki.
Ọ rịọrọ ka onye akaebe ahụ wepụta nkọwa banyere ozu iri itoolu na otu iji mee ya nyocha nke onye nyocha ahụ.
Olukayode Enitan, onye ndụmọdụ nke Gọọmentị Lagos Steeti, jụrụ ịnabata akwụkwọ anamachọihe ahụ.
O mere ka a mara na oku a kpọrọ ya ka ọ bịa n'ụlọ ọrụ ahụ gwara ya ka o nye akụkọ gbasara ihe ndị mere n'October 20, bụ nke mere n'ọnụ ụzọ mgbapụta Lekki, iji nyere ọgbakọ ahụ aka.
Ihe ọ bụla karịrị nke a, ọ kwenyere, na-akpọ ndị otu ahụ ka ha mee ihe na-abụghị iwu ya na ngwa ndị guzobere ya, nke dị ka ime ihe egwu.
Ọ rịọrọ ndị otu ahụ ka ha ghara itinye akwụkwọ anamachọihe ahụ.
Mgbe ọ nụsịrị ndị ọka iwu ndị ọzọ n'okwu a, onye isi oche kọmiti ahụ, Justice Doris Okuwobi, kwuru na ọ bụ ezie na ọ ga -ewe nnukwu oge ka ndị otu ahụ nọrọ ọdụ nyocha nke ụlọ ọrụ 96 ọzọ, na ọ ga -etinye aka na mkpebi ọtụtụ ndị ọka iwu.
Ndị otu ahụ duziri Prọfesọ Obafunwa, onye na-agwọ ọrịa ahụ, ka o mepụta ndekọ na akụkọ gbasara ozu banyere ozu 96 fọdụrụnụ.
Okwu a gara n'ihu na June 19.
Vidio: Ihe nkiri ka onye aghụghọ Eshia na-anwa ịghọgbu nwoke onye Nigeria mara ihe April 22, 2021
Ndị bi na Legọs nwere ego dị nde naịra iri abụọ na ise nke si n'aka onye na-ewepụsị aka ma chọpụtakwa ụgha dị n'okwu a. April 29, 2021
Ndị uweojii n'Abuja anwụchiela mmadụ isii a na-ebo ebubo na ha bụ ndị oji egbe aga, nwetakwala ihe ngosi Nwere ike 2, 2021
N’chọpụta na ohi adọkpụghị ihe ndị ahụ n’ohi Ibori, SERAP na-adụ Buhari ọdụ Nwere ike 23, 2021
Etu ndị mgbachi ihu kpara gburu mmadụ asatọ na mwakpo wakporo ụlọ Uzodinma April 25, 2021
NA MGBE: ndị ohi na-atọrọ ụmụnwaanyị iri abụọ na Katsina bụ ndị bịara nnọkọ aha. April 24, 2021
N’otu ihe mberede Edo mere, ndị ọbịa agbamakwụkwọ itoolu nwụrụ. April 25, 2021
Tags:doris, nnukwu, akwaki akwa, dinglọ ọgwụ reddington, ụlọ ọgwụ reddington lekki